Haleellaa magaalaa Paariis irratti geggeeffameen namoonni 129 du'anii 300 oli madoo ta'an - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Haleellaa magaalaa Paariis irratti geggeeffameen namoonni 129 du’anii 300 oli madoo ta’an
Haleellaa magaalaa Paariis irratti geggeeffameen namoonni 129 du’anii 300 oli madoo ta’an
Shororkaa suukkanneessaa eda magaalaa Paariis, Faransaay, liqimseen hanga ammaatti lubbuun namoota nagaa 120 galaafatameera. Namoonni 200 madoo ta’uun gabaafameera. Kanniin madaayan keesaa haalli namoota 80 yaachisaadha.
Halkan tokkotti haleellaa garajabeenyaa jahatu magaalaa Paariis, akka maddi gabaasa addaddaa agarsiisetti. Qindoominaan ta’uu isaa humni tikaa shakkii hinqabu.
Iddoon lubbuun heddu itti galafatamteefi dhiigni namoota baay’ee itti dhangala’e Bataclan jedhama. Bakka kana qofatti namoota 100 ajjeefame. Naannoon xiyyeeffannaa shororkeessitootaa kuni naannoo manniin nyaataa fi bashannanaa itti heddumaatan ta’uunis beekameera. Ammas boombii fundura istaadiyoomii Stade de France funduratti dhooyeen hubatiin namoota irra gayeera. Yeroo boombiin istaadiyoomii funduratti dhooyutti taphni kubbaa miilaa garee Faransaayii fi Jarmanii jiddutti geggeeffamaa ture. Prezidaantiin biyyattii, Franciose Hollande, kanniin taphicha daawwataa turan namoota 80,000 keessaa tokko ture.
Shororkaan sadarkaa kanaa waan magaalaan Paariis seenaa isii yeroo dhiyoo keessatti argitee hin beekne. Inni akkanaa Woraana Addunyaa 2ffaa asi takkaa Paarisiin hin mudanne. Biyyiti rifannoota keessa bulte irraa ammas mataa olhinqabanne.
Mootummaan labsii yeroo hatattamaa baseen jiraattonni magaalaa Paariis mana isaanii keessa akka turan gorseera. Daangaan biyyattii yeroodhaaf guutummatti cufamuusaa prezidaantiin biyyattii haasawa ummataaf godheen beeksiseera. Sochii konkolaataa irras uggurri bifa garagaraa kan jiru ta’uunis himameera.
Paarisiin balaan amma mudate kuni woggaa tokko keessatti isa lammaffaati. Amajjii dabre halellaa taasifameen namoonnii 12 galaafatamuun yaadannoo yeroo dhihooti.
Namoonni gocha shororkaa irratti bobba’an 8 ajeefamaniiru. Boombii mudhii isaannii irratti hidhatan turan dhooyuudhaan ajjeechaa dabalataa ummata irraan gayeera jedhama. Hidhattoonni lubbuu ummata hangana galaafachuu kan danda’an Kilaashiifi boombii mudhiirratti hidhatamutti dhimma bayuudhaan.
Haleellaan Paaris irratti raawwate kanaan wolqabatee kallattii addunyaa hundarraa sagaleen balaaleffannaa dhagayamaara. Faransaayis dhiiga lammiilee isii dhangala’eef haloo kan baatu ta’uu beeksisuuf yeroo irraa hin fudhanne.
Hanga ammaatti humni ykn gareen haleellaa kanaf itti gaafatamummaa fudhate hin jiru. Angawoonni ISIS malee kan biraa eenyuunuu ta’uu hin danda’u jedhu, garuu.
Previous articleBaqattummaa hanbisuuf Gamtaan Awurooppaa USD biliyoona 2 Afrikaaf laatuuf
Next articleAtleetonni keenya fiigicha Ispeen, Jaappaanii fi Turkitti geggeeffame injifannoon xumuran